चर्चित गायिका चन्द्रा चलाउने फेरि उदाइन सल्यानी झ्याउरे तालमा - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
चर्चित गायिका चन्द्रा चलाउने फेरि उदाइन सल्यानी झ्याउरे तालमा
१९ चैत्र २०७४, सोमबार ०१:५९ April 2, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं । चर्चित गायिका चन्द्रा चलाउने र गायक यज्ञराज बुढाथाेकीकाे नयाँ गीत सार्वजनिक भएकाे छ । झ्याउरे भाकामा “तिर्खा मेट्ने” बाेलकाे गीतसँगै म्यूजिक भिडियाे समेत सार्वजनिक भएको छ ।
गायक यज्ञराज बुढाथोकीकै शब्द र सङ्गीत रहेकाे उक्त गीतलाई म्युजिक बैंक नेपालले बजार व्यवस्थापन गरेको छ । संगीत संयोजन चर्चित संगीत संयोजक कृष्ण पुनले गरेकाे याे गीत सार्वजनिक गरिएसँगै निकै रुचाइएकाे छ ।
गीतकाे म्यूजिक भिडियाे निर्देशन बहुचर्चित निर्देशक तथा सत्यवती कला केन्द्रका सन्चालक उदिराम खड्काले गरेका छन् भने सुरेश श्रेष्ठको छायांकन रहेको छन । साथै नबिन घर्ति मगरले भिडियाेकाे सम्पादन गरेका छन् ।
गीतमा उदिराम खड्का, रीना थापा, बिबेक खड्का र स्वीकृति तिमल्सिनाले नृत्यसहित अभिनय गरेका छन् ।
राष्ट्रिय नृत्य दिवस उत्सव घोषणा गरी मनाइने
पत्रकार रविन्द्र श्रेष्ठ ‘पल पल’ लिएर बजारमा
‘पोर्न साइट’ले हैरान बाबुराम ! त्यस्ता साइटमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा गरे यस्तो समर्थन
आफ्नै विद्यार्थी बलात्कार गर्ने ‘हेड मास्टर’माथि नेकपाले यसरी गर्‍यो कारवाही !
प्रम ओलीका कटु वचन र देशको राजनीतिक भविष्य
ट्रमा सेन्टरबाट हामफालेर अमेरिकी नागरिकले गरे आत्महत्या